Published June 16, 2021 at 10:14 PM CDT
South Sioux City Council himannaa 16 kan magaala irrati dhihaatefi amma kan jalaa dhume plant biogas irrati gahee isaa bahachuuf birrii qixee million akka kenne hime.
Warren manaa akka himannaa dhiheesaniiti faabrikicha irrati seera lolaa gad dhiisu biyyati rrati qilleensa faalame gad dhiisudhan akka manneen isaa balleesan himan.
Waliigalteen Big Ox Energy, insurance compains sadiihii fi kaampanidhan lama kan biraa waliigalatti doolara million 1.75 akka kafalan magalaachi hime jira.
Big Ox operation uumudha fi gurguuradhaf kaampani jajjaba bishaan qulqulluu hin tain addaan baasuf September 2016 kan jalqabeedha. Hanga bara 2019 cufamuuti badii naanicha baaye irrati hamatame ture.
Ogeessi fayyaa northeast Nebraska gosa Covid-19 haarawa ibsani jiran. Delta variant kan argame india kan tae yoo tau baayinan akka dadafee darbuu dandaus himan.
Nebraskan akka himanitti nama guddaa umriin isaa deemef talaali corona virus harki 70% akka fudhatanii jiranifi nama amma fudhatu xiqqaata akka jiru himan. CDC akka jedhetti jiraattonin Nebraska waggaa 18 fi sanii ol ta’ani percent 63% kan ta’an taalai jalqaba kan jalqaba akka fudhatani jiran himan. Kunis akka state guututi harka 24 akkka jiran himan.
Ogeessi fayyaa South Dakota akka jedheti akka dhukubni kun jalqabe irraa baaye kan xiqqaate jiru taus namni taali kana fudhachuu yoo kan didani fall keessa dhukubni kun akka dabaluu alu himani jirani.
Oromo News 06/15/2021Akaam, galatoomi caqasuu dhaaf, kuni Oduu Siouxland Public Miidiyaa Oromiffan Anii Fatiya.Magaalan Sioux City akka ummani nama mana…